Tababar Dubia uga Furmay diblomaasiyiin Soomaali ah – Radio Daljir
Tababar Dubia uga Furmay diblomaasiyiin Soomaali ah
Oktoobar 11, 2017 7:28 b 0
Magaalada Abu Dubai ee dalka Isutagga Imaaraadka Carabta waxaa uu tababar dhinaca diblomaasiyadda ah uga furmay xubno Soomaali ah oo la barayo cilmiha diblomaasiyadda,kaas oo ay bixineyso dowladda Imaaraadka Carabta.
Siminaarkan waxaa soo qaban qaabisay hay’adda Cilmi baarista iyo Istiraatiijiyadda dowladda Imaaraadka Carabta waxaana lagu tababarayaa diblomaasiyiin Soomaali ah.
Agaasimaha Hay’addan oo lagu magacaabo Dr. Jamal Sanad Al Suwaidi,ayaa sheegay in cilmiga diblomaasiyadda uu muhiim u yahay amniga,nabadda iyo madaxbanaanida Gobolka iyo Caalamka oo dhan.
Waxaa uu sheegay in Sanad waliba xarumahooda kale eek u yaalla Waddamada Carabta iyo Caalamka intiisa kale ay qabtaan tababar sidan oo kale ah oo diblomaasiyiinta aqoontooda kor loogu qaadayo.
Ciinwaanka tababarkan ayaa ah “wargeli diblomaasiga Soomaaliyeed”
Waxaa uu Agaasimaha sheegay in ka qeybgalayaasha tababarkan oo Rag iyo Haween isugu jira ay ka faa’ideysan doonaan qeybaha kala duwan ee diblomaasiyadda oo lagu xirayo,dhaqaalaha,xiriirka Caalamiga ah,amaanka,xasiloonida iyo ixtiraamka madaxbanaanida waddamada kale.
Isaga oo ka hadlayay furitaanka SIminaarkan ayuu sheegay in isu soo dhawaanshaha Reer Galbeedka iyo Reer bariga ay ku xirantahay halka ay gaarsiisan tahay xiriirkooda diblomaasiyadeed,islamarkaan qof kasta uu u baahan yahay in uu yeesho qibrad iyo xirfad diblomaasiyadeed.
Xukumadda Somaaliya oo wadda Qorshe lagu Dayactirayo Wabiyada Dalka (dhegayso)
Kenya oo sheegtay in Alshabaab ay kabaxeen Laamu iyo Booni